ဂယာ လေဆိပ် ထဲက ကြော်ငြာမင်းသား ဗုဒ္ဓ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဂယာ လေဆိပ် ထဲက ကြော်ငြာမင်းသား ဗုဒ္ဓ
ဂယာ လေဆိပ် ထဲက ကြော်ငြာမင်းသား ဗုဒ္ဓ
Posted by black chaw on Sep 9, 2011 in Buddhism, Travel | 20 comments
MaMa ရဲ့ ”ဘာမှာကြဦးမလဲ” ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး ဒီစာကိုရေးဖြစ်တာပါ။ ကျွန်တော် မနှစ်က နိုဝင်္ဘာလကုန်ပိုင်းမှာ ဂယာကို ရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုတည်းကိုရောက်ခဲ့တာပါ။ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးခရီးစဉ် တစ်ခုလုံး ကိုတော့ မသွားဘူးသေးပါ။ ဂယာမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ
တည်းပြီးတစ်ပတ်တိတိဘုရားဖူးခဲ့ပါတယ်။အတွေ့အကြုံတွေကို စာရေးမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတော့ မှတ်ဥာဏ်က ပြန်မရတော့ပါဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေကို ပြန်ကြည့်တော့ ဂယာလေဆိပ်ထဲမှာ
ဖုန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ကြော်ငြာမှာ ဗုဒ္ဓပုံတော်နဲ့ ကြော်ငြာထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပုံကိုကြည့်ပြီး နည်းနည်းတော့ ဖီလင်ဖြစ်သွားမိပါတယ်။ ပုံရဲ့ အပေါ်မှာ လမ်းညွှန် တစ်ခု
ချိတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ဒီပုံက အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ဂယာမြို့ အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ဗုဒ္ဓ အပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားကိုလည်း မြင်သာစေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဘာမှန်းကျွန်တော်မပြောတတ်ပါ။ ပုံက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ခဲ့တာပါ။ နည်းနည်းဝါးနေရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ ဗုဒ္ဓကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေ လာလေ့ရှိတဲ့ ဂယာ မြို့ကလေး
ရဲ့ လေဆိပ်မှာ လေယဉ်ပေါ်က ဆင်းပြီး ဂယာလေဆိပ်ထဲကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ တန်းတွေ့ ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ပါဗျာ။
သူကြီးရေ Categories မှာ COPY/PASTE ဖြစ်သွားပါတယ်။
ကူညီလို့ရရင် BUDDHISM ကိုပို့ပေးဘို့ အကူအညီတောင်းတာပါဗျာ။
.. မိန်းမတွေရဲ့အတွင်းခံ.. ဗစ်တိုးရီးယားစိကရက်မှာ ဗုဒ္ဓပုံ ပါဖူးတယ်.။
အပ်ပဲအိုင်ပေါ့ကြာ်ငြာကို.. ၀ဂ္ဂီငါးပါးအလယ်က ဗုဒ္ဓလက်ထဲ အိုင်ဖုံးကိုင်ထားပုံနဲ့ လုပ်ဖူးတယ်..။
ဗုဒ္ဓရဲ့ ပုံတော်ကို နိုင်ငံတစ်ကာမှာ မှုပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ထားတာရှိပါသလား
မရှိသေးဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတစ်ကာမှာ သုံးစွဲချင်တိုင်းသုံးစွဲလို့မရအောင်
ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်းဖြစ်စေ ဒလိုင်းလားမားကဲသို့ သြဇာရှိသူများကဖြစ်စေ
မှတ်ပုံတင်ထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် အဲဒီလိုလုပ်လို့ရမရလေး ပြောပြပေးပါလား..။။
If I am not mistake , chain company from France , open the Bar name as “Buddha Bar” , open in middle east .
ကျေးဇူးပါဗျာ။ ဘုရားပုံတော်ပေါ်မှာ TOILETS ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်တော့ မလုပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်ဗျာ။
အင်း ဒီထက် ပိုပြီး မဖြစ်သင့် မလုပ်သင့် စိတ်မကောင်းစရာကတော့ ပုံရဲ့အပေါ်မှာ Toilets ဆိုတာကြီး ညွှန်ထားတာ အတော့်ကို ဆိုးဝါးလှပါတယ်။
ဒီပုံက တာဝန်ရှိသူတွေ မထင်မှတ် သတိမထားမိဘဲ ဖြစ်နေတာလို့ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပ စုံစုံရယ် သဂျီးတင်ထားတဲ့ ပုံကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းလိုက်တာ
သဂျီးမန်းထားတာ ကြည့်ပြီး လန့်သွားတာပဲ။ တခါက ဘုန်ကြီးတပါး ဟောတာကို တရားနာမိတာ မှတ်မိသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ မိန်းမ ထမီအဆင် ပါတိတ်ပေါ့ အဲ့ဒီမှာ ၂၄ ပစ္စည်းပုံသဏ္ဍန်မျိုး လုပ်ထားတာကို ကန့်ကွက်လို့ ဈေးကွက်ကနေ ပြန်ဖယ်ပေးတယ်တဲ့။ သိရဲ့သားနဲ့ မကန့်ကွက်ရင် ကြာရင် ပိုဆိုးလာနိုင်လို့ စုပြီး အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ရတာတဲ့။ ဘာသာကွဲ တချို့က အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တယ် ပြောတာပဲ။ သူတို့ အတွက်တော့ ဘာမှ မဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ်တွေအတွက်တော့ ဘုရားကို အတွင်းခံမှာ ထည့်ထားတာတော့ ကြည့်ရတာ မခံချင်စရာပဲ။
မမှီပြောသလို မိန်းမပါတိတ်ဆင်မှာ ၁၄ပစ္စည်းပုံ ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့
အဲဒီပါတိတ်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဝတ်မိရင် ခံစားရမှာ
မမှီပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါးကြီးပါတိတ်အဆင်တွေမှာပါ။ ၂၄ ပစ္စည်းပုံသဏ္ဍန်ကို ထည့်ထားတာ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဖိနပ်တွေမှာလည်း ဘုရားပုံတော်တွေထည့်ထားတဲ့ ဖိနပ် ယိုးဒယားကလာတာတွေ ကိုလည်း ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါ။ ဒီလောကကြီးမှာပါ ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားဟာဘုရားပါဘဲ။ ဘုရားဆိုတာ လူတိုင်းအထွတ်အမြတ်ထားကြတာပါ။ မလုပ်သင့်ပါဘူး။မလုပ်ကောင်းပါဘူး။ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာအမှန်ပါဘဲ။
သူများတွေ ကျတော့ ကွန်းမန့် မှာ ပုံ ထည့် လို့ မရဘူး၊ kai ကတော့ ထည့် လို့ ရတယ်။
ရှင်တို့က ရဲ တွေ ကိုး အဲဟုတ်ပါဘူး ရှင် က သဂျီး ကိုး။
Post ထဲက ပုံထက် .. Comment ထဲက ပိုဆိုးတယ်…။ ဟိုတစ်ခါလည်း Akon ရဲ MTV တစ်ခု ကြည့်ဖူးတယ် ဘီကီနီ နဲ ကောင်မလေးတွေ ဘုရားရှေ့မှာ ကုန်ကုန် ကွကွ နဲ။ ထိုင်မှာလား အဲဒီ CD တွေကို လမ်းကြိတ်စက်နဲ ကြိတ်ပစ်လိုက်တယ် ဆိုပဲ..။ အခုလည်း ပြောစမ်းပါ အဲဒီအတွင်ခံ ထုတ်တဲ့ Company လိပ်စာလေး.. သွားပြီး မီးရှို့မလို့..။
ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွေအများစုကတော့ ကိုယ့်ဘုရားရှင်ကိုဦးထိပ်ထားသလို သူများဘုရားကိုလည်းမစော်ကားဘူးလို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘာသဘောနဲ့ ဘုရားပုံတော်ကိုမှ လာပီးထိပါးချင်ရတာပါလိမ့်။ သိသိကြီးနဲ့လုပ်ကြတယ် ထင်ပ။
အော် မကြောက်ကြပါလား။ဒင်းတို့ဒင်းတို့ သေရင် ငရဲရောက်မဲ့ဟာတွေ။တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမပါဖို့ဘဲ။
blackchaw ရေးတဲ့ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး တော်တော်ခံစားသွားရတယ်။ ဒါ အမှတ်တမဲ့ မသိပဲ လုပ်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တမင်သက်သက် လုပ်တာဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ပြုသည့်ကံ ပဲ့တင်သံ သင့်ထံပြန်လာမည် လို့သာ သဘောထားလိုက်။ သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူ သွားလိမ့်မယ်။
အပြန်အလှန် စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ဘာသာကို အဲလို လုပ်ဖို့တော့ ကြောက်တယ်။ (လူလူချင်းကြောက်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အကုသိုလ်ကို ကြောက်တာ။) မလုပ်ရဲဘူး။
မတော်တဆလဲ လုံးဝမဟုတ်ဘူး …
သူများဘာသာရဲ့ အထွဋ်အထိပ်ထားတဲ့ပုံကို ဒီလိုတွေ မလုပ်သင့်မှန်း မသိလို့လဲ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး …။
မိန်းမ ထမီအဆင် ပါတိတ်မှာ ၂၄ ပစ္စည်းပုံမျိုး ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကတော့ တကယ် ၂၄ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။
စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍန်ကို အစိတ်စိတ် အကန့်လေးတွေလုပ်ပြီး အကန့်လေးတွေထိပ်ကို ၀ိုင်းထားတော့ မြန်မာတွေ ၂၄ပစ္စည်းကို စက်ဝိုင်းလိုပုံဖေါ်ထားတာနဲ့ အမြင်ချင်းဆင်သွားတာပါ။ အဲဒီတုန်းက အဲဒီပါတိတ်တွေ တားဆီးလိုက်ရဘူးပါတယ်။
အတွင်းခံမှာ ဗုဒ္ဓ ပုံတော်ကို ထည့်ထားတာ ကြက်သီးတောင်ထမိတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓ ကို မယုံကြည် မကိုးကွယ်သောသူများ၊ ဗုဒ္ဓ နဲ့ မသက်ဆိုင်သူများ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနိမ့်ပါးသူများ၊ ကိုယ်မကိုးကွယ်သော်လည်း တခြားသူတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတစ်ခုကို စော်ကားတာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ် ဆိုတာ မသိနားမလည်သူများ ကတော့ ဒီလို လုပ်ရဲပါလိမ့်မယ်။ ထားပါတော့ ဒါက ဗုဒ္ဓ နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ နေရာတွေ မှာ လုပ်ကြတာမျိုးပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဂယာမြို့လို ဗုဒ္ဓ ပွင့်တော်မူရာနေရာမျိုးမှာ ဗုဒ္ဓ ကို အမှန်တကယ် ကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့ ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ အဓိကလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ မြို့လေးမျိုးမှာ၊ ဗုဒ္ဓ ဟာ သူတို့မကိုးကွယ်သော်လည်း သူတို့မြို့ကို နိုင်ငံခြားငွေရှာပေးနေတာ တစ်ခုတည်းနဲ့တင် မလေးမစားမလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ဒီနေရာကို မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ထိုင်း၊ တရုတ်၊ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအပြင်အနောက်နိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ နေ့စဉ်
အချုပ်ကတော့ ဗုဒ္ဓ ဟာ သူတို့ဒေသ ရဲ့ ဂုဏ်ကိုမျြှင့်တင်ပေးနေတယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ဘူးလို့ ဆိုချင်တာပါ။